रोनाल्डोलाई रोक्न सक्ला जर्मनीले ? : RajdhaniDaily.com
HomeNot-to-be-missedरोनाल्डोलाई रोक्न सक्ला जर्मनीले ?
लन्डन । यूरो कपअन्तर्गत आज तीन खेल हुँदैछ । समूह ‘एफ’ यो दोस्रो चरणको खेल हो । आज साँझ ६:४५ मा पहिलो खेल हंगेरी र फ्रान्सबीच हुनेछ भने दोस्रो खेल ९:४५ मा पोर्चुगल र जर्मनीबीच हुनेछ । १२:४५ मा स्पेन र पोल्याण्ड भिड्ने छन्
ग्रुप अफ डेथ ठानिएको समूह ‘एफ’ मा आज यूरोकपको साविक विजेता पोर्चुगल र लयमा गुमाएको जर्मनीबीचको खेललाई निक्कै चासोका रुपमा हेरिएको छ । नकआउट चरणको प्रवेशका लागि जर्मनीलाई जसरी पनि जित्नुपर्नेछ । त्यसका लागि उसले पोर्चुगलका मुख्य खेलाडी रोनाल्डोलाई रोक्नुपर्ने छ । उसको रणनीति भनेकै रोनाल्डोलाई रोक्न केन्द्रीत हुनेछ । के त्यो रणनीति सफल होला ?
यता, पोर्चुगलको रणनीति पनि जर्मनीलाई पराजित गरेर उसको तेजोबोध गर्नु हुनेछ । छनोट चरणको अन्तिम खेल पोर्चुगलले फ्रान्ससँग खेल्नुपर्नेछ । त्यसैले उच्च मनोबलका लागि पनि जर्मनीविरुद्धको खेल उसका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
हिजो राति भएको खेलमा इंग्ल्याण्ड र स्कटल्यान्डले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् । उनीहरुले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन् । समूह ‘डी’ मा रहेको इंग्ल्याण्डको दुई खेलमा ४ अंक भएको छ । स्कटल्यान्डले भने दुई खेलमा १ अंक जोडेको छ ।
यस्तै गएराति नै भएको दोस्रो खेलमा क्रोएसियाले चेक रिपब्लिकसँग बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको छ । दुवैले एक-एक गोल गरेर बराबरी खेलेका हुन् । बराबरीसँगै समूह ‘डी’ मा रहेको क्रोएसियाले दुई खेलमा एक अंक जोड्दै तेस्रो स्थानमा रहेको छ । दुई खेलमा चार अंक जोडेको चेक रिपब्लिक समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।
त्यसैगरी हिजो नै भएको पहिलो खेलमा स्वीडेनले स्लोभाकियालाई हराएको छ । सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको खेलमा स्विडेनले स्लोभाकियालाई एक–शून्यले हराएको हो ।
जलविद्युत्मा चाखलाग्दा तथ्य